Fanamafisana traikefa - PADAP
Anisan’ny singa iray ao amin’ny tetikasa PADAP ny fanamafisana ny fahaiza-manao. Izy io dia mikendry ireo fikambanana eo an-toerana, ny tompon’andraikitra itsinjaram-pahefana isanisany ary ny solontenan’ny minisitera foibe any amin’ilay faritra. Amin’ny ankapobeny, ny tetikasa dia mikendry mafy ny hanampy ireo mpandray anjara hitantana ny tontolony amin’ny fomba fiaraha -miasa miaraka.
Ireo fandaharana izay mitentina 10 tapitrisa dolara
Ireo mpitarika ny tetikasa PADAP dia nanokana teti-bola mitentina 10,7 tapitrisa dolara ho an’ny fanamafina fahaiza-manao. Ny ampahany amin’io vola io dia hampiasaina amin’ny famatsiana ny fanohanana ny ara-teknika, ny fampiharana ny lalàna sy lalàna mifehy ny fomban-drazana na ny Dina, ny fitantanana ny harena ara-bola sy ny olombelona ary ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiray antoka. Ny ampahany iray hafa kosa dia natao onitra nomena an’ireo tompon-tany izay manohana ny fomba fiarovana ny rafitry ny fanondrahana.
Ireo fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo fikambanana eo an-toerana
Toy ny fikambanan’ny mpampiasa ala na vondron’olona ifotony “Communautés de base” (COBA), ny fikambanan’ny mpampiasa rano na ny “association des usagers de l’eau” (AUE) koa dia anisan’ireo mpahazo tombontsoa amin’ny fananganana fahaiza-manao omena ao anatin’ny tetikasa PADAP. Nisy ny fiofanana izay mifantoka amin’ny fitantanana ny loharanon-drano ary koa ny fikojakojana ny rafitra fanondrahana. Ny fomba tsara hitantanana ny ala, ny fifehezana ny doro tanety sy ny fanatsarana ny tahan’ny ala dia horesahina ihany koa mandritra ny fanamafisana ny fahaiza-manao.
Manana ny anjara toerany ao anatin’ny fetra fampivoarana ny tetikasa PADAP ihany koa ireo vondrona mpiompy ary indrindra ny fitantanana eo an-toerana miandraikitra ny fampiasana tany sy ny fitarihan’ny mpiompy sy ny tantsaha mipetraka amin’ny faritra kendrena. Hamafisina ny filàna mifehy ny fiompiana sy ny fikarakarana ny biby mba hampihenana ny fandoroana ny ahitra sy ny doro tanety.
Ireny fomba fanao ireny tokoa dia iray amin’ireo antony lehibe mahatonga ny fikaohon-tany sy ny fikatsoan’ny renirano sy ny lakandrano amin’ireo faritra sasany. Izany no antony nanoloran’ny tetikasa PADAP vahaolana hafa momba ny famahanana mifandraika amin’ny fampiharana ny voly fatao sakafom-biby sy ny fitantanana tsara kokoa ny fitarihan-drano.
Fananganana fahaiza-manaon’ny manampahefana eo an-toerana itsinjaram-pahefana
Ny tetikasa PADAP dia mikasa ny hanamafy ny fahafahan’ny manampahefana itsinjaram-pahefana eo an-toerana, indrindra ny distrika ary ireo faritra voafantina. Ny tanjona dia ny hampirisihana ny lehiben’ny fitantanana ny faritra, ny ben’ny tanàna sy ny ekipany hampihatra fomba fijery ny tontolo. Namboarina ho amin’izay ny tanjona izany ihany koa ny drafitra fitantanana ny tany monisipaly sy isam-paritra.
Anisan’ireo mpandray anjara amin’ny fananganana fahaiza-manao amin’ny tetikasa PADAP ihany koa ny mpiasa eo an-toerana sy ny ministera nasionaly mpiahy, ny mpikaroka avy amin’ny fikambanana teknika manam-pahaizana manokana, indrindra ny oniversite sy ny fikambanana mpikaroka amin’ny sehatra tsy miankina.
Aorian’ny fananganana fahaiza-manao, ny mponina sy rafitra miandraikitra ny ala, rano, fambolena ary fitantanana ny tany dia tsy tokony hanana olana amin’ny fandrindrana ny hetsika ataon’izy ireo.